रिक्सा चढेर अस्पताल धाउँदाधाउँदै २० वर्षीया युवतीले ज्यान गुमाइन् – Health Post Nepal
२०७७ साउन २४ गते १७:४३
दमका बिरामी उनी। शुक्रबार राति एक्कासि सास फेर्न गाह्रो हुँदै आयो। हल्का ज्वरो पनि थियो। तर, न एम्बुलेन्स आए न त अस्पतालले भर्ना लियो।
अटो रिक्सामा अस्पतालको चक्कर लगाउँदा लगाउँदै वीरगन्जकी २० वर्षीया युवतीको ज्यान गयो।
वीरगन्ज महानगरपालिका वडा २ छपकैया निवासी ती युवती (विष्णु लामा) लाई उपचारका लागि वीरगन्जका कुनै पनि अस्पतालले भर्ना लिन मानेन।
लामो समयदेखि दमको रोगबाट पीडित उनलाई साउन २१ गतेदेखि सामान्य ज्वरो आएको थियो। उनलाई ज्वरो आएपछि स्थानीय औषधी पसलबाट औषधी लिएर खाएपछि ज्वरो निको भयो । तर साउन २३ गते शुक्रबार राति एक्कासि फेरि ज्वरो आउनुका साथै सास फेर्न समस्या हुन थाल्यो ।
छिमेकीसमेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च वीरगन्ज महानगर समितिका अध्यक्ष अजित भुजेलले अस्पताल लैजान एम्बुलेन्सलाई फोन गर्न थाले तर कुनै एम्बुलेन्सले फोन उठाएन।
लामाको अवस्था जटिल बन्दै गइरहेको थियो । अध्यक्ष भुजेलले एम्बुलेन्स फोन उठाएन भनेर खोज्दै मेनरोडमा आए तर पाएनन् एम्बुलेन्स। पछि एउटा अटो रिक्सा भेटियो।
लामा र उनका दुईजना आफन्तलाई बसाएर अस्पतालतर्फ पठाइदिए । उनीहरू पहिला वीरगन्जको एडभान्स अस्पताल, तराई अस्पताल, भवानी अस्पताल, बयोधा अस्पताल, नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालित रहेको गण्डक अस्पताल लगियो तर कुनै पनि अस्पतालले भर्ना गरेर उपचार गर्न मानेन । लामालाई लिएर उनको परिवारले अस्पतालको गोलचक्कर लगाउँदा लगाउँदै थाकेर फेरि आफ्नो छिमेकी भुजेललाई फोन गरे । अस्पतालहरूले भर्ना गरेर उपचार नदिएपछि अलपत्र परेकी ती युवती अस्पताल गेटअगाडि नै उपचार नपाउँदा छट्पटाइरहेकी थिइन् ।
उनका सहयोगी छिमेकी भुजेलले सामाजिक सन्जालमा उद्दारका लागि गुहार गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला सचिव तबरेज अहमदको सहयोगमा उद्दार गरियो । उनले लामाको परिवारलाई सरकारमातहतमा रहेको नारायणी अस्पतालमा पुग्नु म नि आउँदै छु भनेर फोन राखे । नेता अहमद र छिमेकी भुजेल नारायणीमा पुगे, तर त्यहाँ पनि भर्ना गर्न मानेन ।
नारायणीका डाक्टरले हामीकहाँ आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरिएको छ, हामी भर्ना लिन सक्दैनौं, तपाईहरू छिटो निजी अस्पतालमा जानुस् भने । फेरि त्यहाँबाट अटो रिक्सामा राखेर वीरगन्जको भवानी, नेसनल मेडिकल कलेज, तराईमा लगियो तर सबैले एउटै कुरा भन्यो पिसिआर रिपोर्ट छ भने हामी भर्ना गर्छौं, छैन भने गर्दैनौं भने । तर युवती लामासँग पिसिआर रिपोर्ट थिएन ।
गण्डकस्थित नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पताल वीरगन्ज हेल्थकेयर अस्पतालमा लामालाई लगियो तर त्यो अस्पतालले पनि भर्ना गरेन । त्यहाँ पनि त्यस्तै भन्यो । पिसिआर रिपोर्टबिना कसरी कोरोना बिरामी राख्ने भन्यो ।
नेता अहमदले अर्को नारायणी अस्थायी कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा सञ्चालित गण्डक अस्पतालका सयोजक डा. उदयनारायण सिंहको समन्वयमा राति १ बजे नै उपचारको अभावमा छट्पटाइरहेकी ती युवतीलाई अटो रिक्सामा राखेर गण्डकमा पु-याएका थिए । तर उपचारका लागि अस्पतालभित्र पु-याउन नपाउँदै लामाको ज्यान गयो ।
अन्तमा गण्डक विशेष कोभिडमा ती युवतीको निधन भएको जसपाका नेता तबरेज अहमदले जानकारी गराए ।
कोरोना महामारीमा वीरगन्जमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीमा धमाधम संक्रमण देखिएपछि वीरगन्जका असपतालहरूले बिरामीलाई भर्ना लिन नमानेपछि दुई दिनमा तीनजनाले ज्यान गुमाएको नेता अहमदले जानकारी गराए । उनले प्रश्न गरे, ‘मेरो आँखाअगाडि लामाले ज्यान गुमाइन् । यसको दोषी को हो त सरकार?
अहमदले राति १० बजेदेखि एडभान्स अस्पतालबाट सुरु भएको उपचार यात्रा वीरगन्जका सबै अस्पतालको गोलचक्कर लगाउँदा लगाउँदै गर्दा रातको २ बजेर १२ मिनेटमा जीवनयात्रा नै सकिएको देख्नुपरेको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले केही दिनअघि मात्र बिरामीलाई भर्ना नलिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । अस्पतालले आइसोलेसन वार्ड बनाउने र कोभिड रिपोर्टका संक्रमित भएकालाई मात्र कोभिड अस्पतालमा रेफर गर्ने र अन्यलाई उपचार गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो ।
निर्देशन जारी गरेको तीन दिनमा तीनजनाको उपचार नपाएर मृत्यु भइसकेको छ । मृतक युवतीका श्रीमान विदेशमा छन् । उनी चार वर्षे बच्चासहित छपकैयामा डेरा लिएर बस्दै आएकी थिइन् । गण्डक अस्पतालले कोरोना भाइरस परीक्षणका लागि मृतक लामाको स्वाब संकलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोशालामा पठाइएको छ । त्यसको पिसिआर रिपोर्ट आउन भने बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।